AMBONY LAHARANA NY SAKRAMENTA
Ilaina ny Toriteny amin’ny fanompoam-pivavahana, hoy ny Fiangonana Katolika, fa tsy mitana ny toerana voalohany. Manaraka aorian’ny Sakramenta ny Toriteny, azo tsy asiana. Mpanompon’ny Sakramenta ny Toriteny, miankina aminy, baikoiny.
Ho an’ny trano fiangonana Katolika sasany izay ahitana azy, dia eny ivelan’ny Otely misy ny Latabatra Masina ny Fitorianteny. Ny Katedraly Andohalo dia manana izany, izay toy ny Polipitra Protestanta ireny. Raha tsy manana kosa ilay trano fiangonana Katolika, dia eo amin’ny Otely ka eny amin’ny sisiny no misy io fitorianteny io.
MITOVY LAHARANA IZY ROA
Avy amin’ny Tenin’Andriamanitra no ivoahan’ny Toriteny sy ny Sakramenta. Loharano iray ihany, fototra iray ihany, ary atobaka ho an’ny Fiangonana. Araka an’i Lotera, ny Fanasan’ny Tompo dia Teny hita maso, Toriteny azo tsapain-tanana. Amafisin’i Melanchthon izany : “ny Finoana dia mifoha avy amin’ny Teny sy ny Sakramenta”.
Ny Fitorianteny ho an’ny Fiangonana Loterana dia miray toerana amin’ny Latabatra Masina, mifanaraka amin’io fijery mampitovy laharana azy roa io.
AMBONY LAHARANA NY TORITENY
Ny Fiangonana reforme, toy ny FJKM, no manana ity fijery ity. Ny Toriteny no iasan’Andriamanitra voalohany ao amin’ny olona, vao manaraka ny Sakramenta. Tsy azo atao ny Fanasan’ny Tompo, raha tsy misy Toriteny mialoha azy. Izany koa no ametrahany ny Batisa aorian’ny Toriteny.
Ny “Confession de la Rochelle” (1559-1570), ahitana ny foto-pampianarana reforme, dia milaza fa « nomen’Andriamanitra ny Fanasan’ny Tompo ho fanampin’ny Toriteny ». ny “Consensus Tigurinus” (1549) dia milaza ny Fanasan’ny Tompo ho miankina sy fanampin’ny Toriteny, ary ambany ny laharany amin’izany.
AVELA NY SAKRAMENTA
Past A .ZAKA